Nataon’Andriamanitra Izay Hamonjena ny Olona Tamin’ny Alalan’ny Mesia
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Luo Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Nzema Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Uruund Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Nampanantena an’i Abrahama Andriamanitra fa avy amin’ny taranany no hipoitra ilay ‘taranaka.’ Amin’ny alalan’izy io no hitahiana ny “firenena rehetra.” (Genesisy 22:18) Nifindra tany Ejipta i Jakoba, zafikelin’i Abrahama, tatỳ aoriana. Nihamaro ny taranany ka lasa nantsoina hoe firenen’Israely.
Nisy Farao lozabe nanandevo ny Israelita tany Ejipta, mandra-pahatongan’ny fotoana namonjen’Andriamanitra azy ireo. I Mosesy mpaminany no nasainy nitarika azy ireo niala tao, ary nanasaraka ny Ranomasina Mena. Nomen’Andriamanitra lalàna ny Israelita mba hiaro sy hitari-dalana azy ireo, ka anisan’izany ny Didy Folo. Tsy maintsy nanao fanatitra, ohatra, izy ireo mba ho voavela heloka. Nilaza tamin’izy ireo i Mosesy fa mbola handefa mpaminany hafa Andriamanitra. Tsy iza izany fa ilay ‘taranaka’ nampanantenaina.
Nilaza tamin’i Davida Mpanjaka Andriamanitra, 400 taona mahery tatỳ aoriana, fa hanjaka mandrakizay ilay ‘taranaka’ noresahina tany Edena. Izy io no Mesia na Mpanafaka voatendrin’Andriamanitra mba hamonjy ny olombelona sy hamerina indray ny Paradisa eto an-tany.
Nanome fanazavana hafa momba ny Mesia Andriamanitra, tamin’ny alalan’i Davida sy ny mpaminany hafa. Nilaza izy ireo fa hanetry tena sy ho tsara fanahy izy io. Tsy hisy intsony ny mosary sy ny tsy rariny ary ny ady rehefa hitondra izy. Hihavana daholo ny olona ary hihavana amin’ny biby. Hofoanan’Andriamanitra ny aretina sy ny fijaliana ary ny fahafatesana, satria tsy anisan’ny fikasany. Ireo efa maty kosa hatsangana indray.
Nampitain’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Mika mpaminany fa ho teraka ao Betlehema ny Mesia. Nolazainy tamin’ny alalan’i Daniela mpaminany koa fa hovonoina ny Mesia. Hatsangan’Andriamanitra amin’ny maty anefa izy, ary hotendreny ho Mpanjaka any an-danitra. Hitan’i Daniela koa fa hisolo ny fanjakana hafa rehetra ny Fanjakan’ny Mesia. Tonga tokoa ve izy?
—Miorina amin’ny Genesisy toko 22-50, Eksodosy, Deoteronomia, 2 Samoela, Salamo, Isaia, Daniela, Mika, Zakaria 9:9.
NY ANARANA MASIN’ANDRIAMANITRA
Ao amin’ny Genesisy 2:4 no ahitana voalohany ny hoe Jehovah, ao amin’ny Baiboly. Miseho im-7 000 eo ho eo io anaran’Andriamanitra io ao amin’ny Baiboly sora-tanana, tamin’ny fiteny nanoratana azy tany am-boalohany. Io anarana io dia midika hoe “Manao Izay Hahatonga Izy.” Matoky àry isika fa mahavita manatanteraka ny fikasany sy ny fampanantenany rehetra Andriamanitra.